Child – Healthy Life Journal
ကလေးငယ်များ အိပ်ရာဝင်ချိန် နောက်ကျခြင်းက အဝလွန်စေနိုင်
ကလေးငယ်ကို မဖြစ်မနေ သင်ပေးရမည့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး
ကလေးများကစားရင်း ဦးခေါင်းထိခိုက်မှု မရှိစေရန်
လမစေ့ ကလေးမွေးဖွားခြင်း မဖြစ်စေမည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အလေ့အထများ
ကလေးငယ်တွေချောင်းဆိုးရင် (Baby’s Cough)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော့်သားလေးက အခုတနေ့ကို ၆ ခါလောက် ချောင်းဆိုးနေတယ်ဆရာ။ အိမ်မှာလဲ air con ကိုတော့ ၂၇-၂၈ လောက်ပဲထားတာ၊ တနေ့လုံးတော့ ဖွင့်ပါတယ်ဆရာ။ နှာလဲမကြာမကြာ ချီတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခြေထောက်လေးအေးရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးက အခု...
ကလေးတွေ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ဘယ်အရွယ်ကတည်းက စတင်ဂရုစိုက်ရမလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ကလေးတွေ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ မိခင်ဝမ်းဗိုက်အတွင်း သန္ဓေသားဘဝကတည်းက မိခင်ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာပင် တစ်စက္ကန့်တိုင်း၊ တစ်စက္ကန့်တိုင်း နူရွန်အသစ် ခုနစ်ရာခန့်ထုတ်နေပါတယ်။ ဒီအရွယ်ကတည်းက ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အာဟာရလိုအပ်နေပါပြီ။ ကလေးမွေးပြီးချိန်မှာ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ ကျွေးသင့်သလဲ...
မိခင်နို့စို့တဲ့ကလေးနဲ့ နို့မှုန့်သောက်ပြီး ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေး ဘာကွာခြားသလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မိခင်နို့ပုံမှန်စို့ရတဲ့ကလေးက ကြီးထွားလာတဲ့အခါ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းပါတယ်။ နို့မှုန့်နဲ့ကြီးလာရတဲ့ ကလေးကတော့ နည်းနည်းဝကစ်ကစ်လေး ဖြစ်နေတာပေါ့။ တချို့မိခင်တွေဆို ကလေးကို လေးလလောက်နို့တိုက်ပြီးရင် ဆက်မတိုက်ချင်တာမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း အလုပ်ပြန်ဝင်ရတာကြောင့် ကလေးကို သေသေချာချာ နို့မတိုက်နိုင်တော့တာမျိုး...
ကလေးစကားပြောနှေးခြင်း (Speech and Language Delay and Disorder)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ Q. ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော့်သားဟာ အခု ၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ တခြားကလေးတွေလို စကားမသွက်ပါဘူး။ ဖေဖေမေမေနဲ့ တချို့စကား (ဥပမာ – ရေရေ၊ ဘဘ၊ မမ၊ ပေးပါစတာ) တွေပဲ ပြောပါတယ်။ စိုးရိမ်ရပါသလားဆရာ။ စကားသွက်အောင်...
ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတာ လက္ခဏာ (၁၀) ခု (10 Common Symptoms in Infants and Young Toddlers )
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ 1. Stomach Ache ကလေးငိုရင် နို့ဆာတာ၊ လေနာတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကလေးနည်းနည်းကြီးရင် သံကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ လေကြောင့်နာရင် ခါးကော့ငိုမယ်။ Colic ဗိုက်ရစ်နာတာ၊ Gastroesophageal reflux အစာခြေရည်အထက်ဆန်တာ၊ Food intolerance အစာကိုလက်သင့်မခံနိုင်တာ၊ Virus ဗိုင်းရပ်စ်တွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။...
“ငိုတတ်တဲ့ကလေး နို့စို့ရတယ်”ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ ကလေးလေးတွေငိုတဲ့အခါ သူတို့ဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတာ မိဘတွေက သတိပြုမိသွားလေ့ရှိပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးတွေက သူတို့လိုအပ်ချက်ကို ငိုကြွေးမှုကတစ်ဆင့် ပြသတဲ့အခါ မိခင်တွေက ဖြည့်ဆည်းပေးရင်းနဲ့ မိခင်နဲ့ကလေးကြား သံယောဇဉ်ကို ခိုင်မြဲသွားစေပါတယ်။ ကလေးတွေ ငိုကြွေးတဲ့အခါ ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတတ်တဲ့ မိဘတွေစိတ်သက်သာရာရစေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။...